Degmada Dhahar oo wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka u gudbtay caawa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Dhahar oo wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka u gudbtay caawa
Degmada Dhahar oo wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka u gudbtay caawa
Habeenkii shannaad tartan Cilmiyeedka degmooyinka gobollada ee Warbaahinta Qaranka, isla markaana u taabagelinayo maamulka gobolka Banaadir, waxaa ku tartamay caawa degmooyinka Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo degmada Dhuusamareeb oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Sida caadada aheyn degmooyinka ayaa la weydiiyey min toddobo su’aal, taas oo wadarta guud ka dhigeysa 14 su’aal, qeybta hore waxa lagu kala nastay min afar su’aallood, kaddib ayaana la soo bandhigay warbixinnadii Taariikhda labada degmo ka hadlayey, si xiriirkooda iyo isdhaxgalkoodu uu u sii xoogeysto.
Degmada Dhahar Natiijo
Degmada Dhahar ee gobolka Sanaag tartamayaashii ka socdey, waxaa la weydiiyey toddobo su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabeen afar ka mid ah su’aalahaasi, saddex waa ay iska qaldeen, waxa ay ka faa’ideysteen laba su’aal oo soo hareermartay degmada Dhuusamareeb.
Degmada Dhuusamareeb Natiijo
Degmada Dhuusamareeb, waxaa la weydiiyey toddobo su’aal waxa ay ka jawaabeen afar su’aal, saddex ayeey iska qaldeen, hal su’aalna si ka faa’ideysi ah ayeey uga jawaabeen.
Axmed Cali Kaahiye oo guddiga tartanka ka tirsan, ayaa sidaan u shaaciyey natiijada tartankii “Dhuusamareeb, waxa ay ka jawaabeen afar su’aal saddex ayeey qaldeen hal su’aal ayeey si ka faa’ideysi ah uga jawaabeen, sidaas waxa ay uruursadeen 10 dhibcood”.
Sidoo kale degmada Dhahar waxa ay si sax ah uga jawaabeen afar ka mid ah su’aalahaasi, saddex waa ay iska qaldeen, waxa ay ka faa’ideysteen laba su’aal oo soo hareermartay degmada Dhuusamareeb, Dhahar waxa ay uruursadeen iyaguna 12 dhibcood oo waxa ay u gudbeen wareegga labaad ee tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.
Guddiga ayaa ku dhawaaqay in habeen dambe ay tartanka ku ballansan yihiin degmooyin Kaxda iyo X/weyne oo ka wada tirsan gobolka Benaadir.
Previous articleDhismaha cusub ee Jaamacadda Galgaduud oo xariga laga jaray
Next articleHorjooge ka tirsan Maleeshiyaadka Al-shabaab oo isu soo dhiibay ciidanka Xoogga Dalka.